Ahmed Madoobe oo magacaabay guddiga doorashada si loo guda galo xubista xildhibaanada iyo xubnaha aqalka sare - BAARGAAL.NET
Ahmed Madoobe oo magacaabay guddiga doorashada si loo guda galo xubista xildhibaanada iyo xubnaha aqalka sare
Madaxweynaha dawladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madobe) ayaa magacaabay guddiga doorashada Heer dawlad gobaleed ee Jubbaland, kuwaas oo maamuli doona doorashada xubnaha labada Aqal ee dawladda Soomaaliya oo ka dhici doonta magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa magacaabay xubnahan markii uu latashiyo kala duwan la yeeshay Kuxigeenadiisa iyo Odayaasha dhaqanka ee beelaha Jubbaland.
Guddigan waxay si toos ah ula shaqeyn doonaan Guddiga doorashada Heer Faderaal ee uu horey u magacaabay Madaxweynaha dawladda Faderaalka Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ay noqon doonaan kuwa qabanaya shaqada ugu badan.
Magacyada guddigan ayaa kala ah.
1.Cabdi Cali Raage
2. Maxamuud Xassan Cilmi
3. Maxamed Wali Cabdullaahi Cumar
Xubnahan 8-da ah ayaa lagu biirin doona 3 qof oo kale, kuwaas oo ay soo magacaabi doonaan Madaxda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, maadaama ay kala shaqeyn doonaan arrimaha doorashada 2016.